विश्व इतिहासकैं कालो दिन, विमान दुर्घटनामा १५७ जनाको मृत्यु ! « Janaboli
विश्व इतिहासकैं कालो दिन, विमान दुर्घटनामा १५७ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । आज विश्वका लागि सबैंभन्दा दुःखको दिन सावित भएको छ । इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबाबाट नैरोबीका लागि १४९ यात्रुसहित ८ जना चालकदलका सदस्य लिएर आइतबार उडेको विमान दुर्घटनामा हुँदा विमानमा रहेका सबै जनाको मृत्यु भएको इथियोपियाली राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।
इथियोपियन विमान कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै फाना ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेटले विमानमा रहेका सबै जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो । इथियोपियाली विमान कम्पनीको बोइङ ७३७–८०० म्याक्स अदिस अबाबा बोल इन्टरनेशनल एअरपोर्टबाट विहान ८ः३८ मा उडेको र उडेको छ मिनेटपछि नै विमानको टावरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको विमान कम्पनीले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
विमान इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबाबाट ४५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित बोसोफ्टु शहर नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैबीच इथियोपियाको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विमानमा परी मृत्यु भएका यात्रुका आफन्तजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । एएफपी
सडक दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या २ पुग्यो १२ भन्दा धेरै गम्भीर घाइते !
काठमाडौं । आज भएको सडक दुर्घटनामा २ जनाको ज्यान गएको छ । भारतको मध्य प्रदेश
जेलभित्र अचानक भएको दोहोरो झडपमा ३२ जना मारिए
काठमाडौं । जेल भित्र भएको लडाईले उग्र रुप लिदा ३२ जनाको ज्यान गएको छ ।
काठमाडौं । १७० जना यात्रु लिएर उडेको विमान दुर्घटनामा परेको छ । भारत चेन्नईको तिरुचिरापल्ली
निर्वाचनको नतिजा नआउँदै नरेन्द्र मोदीलाई कसले दियो बधाई
नयाँ दिल्ली । विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा हरेक ५ वर्षको फरकमा निर्वाचन हुने
छुट्ला हैं : परीक्षा फारम सम्बन्धी त्रिविको अत्यन्तै जरुरी सुचना !
स्नातक तह तेस्रो बर्षको सबै संकायका परीक्षाको तालिका (रुटीन) प्रकाशित [रुटीनसहित]
शिक्षिकाकी छोरीको परीक्षाका बेला विदेश भ्रमण परेकाले परीक्षा नै सार्ने तयारी
अब शिक्षा प्लस–टुमापनि कानून विषय पढाइ हुने : यस्तो छ ब्यवस्था
स्नातकोत्तर तह दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा तालिका प्रकाशित [तालिकासहित]
काठमाडौ महल अगाडी भयान दुर्घटना
कर्मचारीलाई झड्का लाग्ने खबर : तलब भत्ता सम्बन्धि बजेटमा यस्तो नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी
जेठ १ गतेदेखि ३२ गतेसम्म सूर्य वृष राशिमा बक्र : १२ वटै राशिमा छ यस्तो सीधा असर / मासिक राशिफल
सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो नयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको तयारी